PSJTV | विचित्र संसार
Top विचित्र संसार Stories
काठमाडौं, २९ वैशाख । जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले लगाएको पोसाक मिल्नुमा संयोग थियो कि आकस्मिकता ? शुक्रबार दिनभर ओलीको पोसाकको आलोचना भयो, तर कुरा बेग्लै थियो । ...
सेक्स टुरिजमका लागि प्रख्यात टपटेन देशहरु
एजेन्सी । केही मानिसहरुका लागि टुरको योजना फुल रोमान्चकता हुन्छ । सेक्स टुरिजम यस्तै रोमाञ्चकताको एक भाग हो । जो कयौं देशका लागि सबै छिटो र धेरै कमाइ गर्ने स्रोत पनि ...
बिर्य चोर्न पुरुषको अपहरण गरी बलात्कार
एजेन्सी । बलात्कार पुरुषले मात्रै गर्दैनन महीला पनि गर्छन तर महीलाले बलात्कार गरेको कमै घटना सुन्नमा आउछन । दक्षिण अफ्रिकामा भएको एउटा यस्तो घटना बाहीर आएको छ कि तिन जना मिलेर ...
नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा २० जनाले कपाल प्रत्यारोपण गरेका छन् । यो प्रविधि टाँका लगाइने वा कुनै प्रकारको दाग देखिने खालको होइन । टाउकोमा बढी कपाल भएको ठाउँबाट एक–एकवटा कपाल निकालेर नभएको भागमा ...
काठमाडौँ l संसारमा मानिस मात्र होइन, जनावरहरू पनि वेश्यावृत्ति गर्छन् । यो कुरा जनावर विशेषज्ञहरूले १९९८ मा अन्टार्कटिकामा पत्ता लगाएका हुन् । उनीहरुले एडेली पेन्गुइन जातिमा वेश्यावृत्तिको प्रचलन फेला पारेका थिए । पेन्गुइनहरू ...
जब मागिन श्रीमतीले मृत लोग्नेको शुक्रकिट
बीबीसी ll के कुनैपनि महिलाको आफ्नो पतिको मृत्युपछि पतिको शुक्रकिटमाथि पनि अधिकार रहन्छ ? भारतको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल एम्सका डाक्टरहरुको अगाडि यहीँ प्रश्न तेर्सियो जब एक महिलाले आफ्नो मृत लोग्नेको पोष्ट ...
एजेन्सी काठमाडौं । बिद्यालयमा राम्रो कुरा सिकाउनका लागि आफ्नो छोराछोरी लाई अभिभावकले पठाउँछन् । केहि नयाँ कुरा सिकोस् र राम्रो नराम्रो कुरा छुट्याउन सकोस भनेर अभिभावकले ६ घण्टाको समयका लागि दैनिक बिद्यालय ...
हेर्दा अश्लील लाग्ला तर पढेपछि तपाइको आँखा पक्कै रसाउँछ
काठमाडौं, २८ असार ll तल दिइएको एउटा तस्बिर १ एउटा यस्तो तस्बिर जसलाई बुझ्न धेरै समय लाग्यो। जबसम्म स्वयम् चित्रकारले यो तस्बिर पछाडिको रहष्य खोलेनन् तब सम्म बिश्लेषकहरु पनि अति नै ...
पत्याउनुहुन्छ ? १०१ वर्षीया वृद्धाले ९ पाउन्डको बच्चा जन्माइन्
एजेन्सी २६ असार । इटालीमा एउटा निकै अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । सय वर्ष कटेकी एक वृद्धाले बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् ।इटालीकी १०१ वर्षीया एनाटोलिया भर्टाडेलाले ९ पाउन्ड अर्थात ४ ...
हाँसेको पनि पैसा ? एकचोटी हाँसेको ३७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ !
हाँसेको पनि पैसा ? हो, जति धेरै हाँस्नुभयो उति धेरै पैसा तिर्नुपर्नेछ । पैसा तिर्नबाट जोगिन हाँसो नलागेको अभिनय गर्न पाउनुहुनेछैन, मेसिनले तपाइँ कत्तिको हाँस्नुभएको छ भित्रैदेखि भन्ने कुरा जाँचिहाल्नेछ र तपाइँको ...
महिला पुलिसको टपलेस सेल्फीले मच्चायो यस्तो हंगामा
पोखरा ll सेल्फी खिच्ने मानिसको अजिवको चाहाना आजभोली फेसन भएको छ । त्यही फेसनले कतिको जिन्दगी विग्रिएको छ भने कतिको जागिर नै गुगमो छ । यस्तै एउटा घटना भएको छ मेस्सिकोमा । ...
पत्याउनु हुन्छ ?? दश वर्षीया बालकको तौल १९२ किलो
एजेन्सी / इन्डोनेशियाको पश्चिमी जावा प्रान्तमा दश वर्षीय बालक विश्वको सबैभन्दा मोटा भएको डेली मेलले उल्लेख गरेको छ । १९२ किलो तौल भएका आर्या पेर्माना विश्वको सबैभन्दा मोटो व्यक्ति भएको खुलेको ...
स्विमिङ पुलमा नुहाउँदा १६ किशोरी गर्भवती
सबैले बुझेको कुरा के हो भने प्राकृतिक रुपले महिला गर्भवती हुनका लागि उनको पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध भएकै हुनुपर्छ । तर अमेरिकाको फ्लोरिडामा एउटा यस्तो घटना भएको छ, जसले उल्लेखित मान्यतालाई चुनौति दिएको ...
बैंकबाट ऋण लिन नाङ्गो तस्बिर बन्धकी
असार १ – चीनमा केही बैंकले आफ्ना सेवाग्राहीले लगेको ऋण उठाउन लाजमर्दो उपाय अपाउने गरेको पाइएको छ । गैरकानुनी ऋण असुलिका लागि सेवाग्राहीको नाङ्गो तस्बिर बन्धकी राख्ने गरेका छन् । उनीहरु नाङ्गो ...
सुरुङभित्र बस्छन् हजारौं अमेरिकी : यस्तो छ उनीहरुको दर्दनाक जीवन (फोटोसहित)
अमेरिका दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली देश मानिन्छ । विश्वभरीका गरीव राष्ट्रहरुको अभिभावक जसरी चासो दिँदै हिड्ने अमेरिका, आफ्नै नागरिकलाई भने सुरुङ भित्र राखेका छन् । अग्रेजी पत्रिका डेली मेलका अनुसार यस्तो हालतमा रहने ...